Ahoana ny fomba hanaovana ny vokan'ny glitch amin'ny Photoshop, tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Amin'ny computing, ny glitch dia hadisoana, rehefa misy rakitra tsy voafangaro tsara na simba, dia misy sary diso vokarina izay mahatonga an'ity sary ity. Ny estetika "glitch" dia ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny doka sy ny endrika sary hanomezana sary Retro sy mahaliana ny sary. Amin'ity lesona ity dia hampianariko anao ny fomba fanaovana ny vokatry ny glitch amin'ny Photoshop amin'ny dingana vitsivitsy monja Aza adino izany!
1 Omano ny loharano ilaina mba hamoronana ny vokatry ny glitch ao amin'ny Photoshop
2 Sokafy ny sary ary averina mitovy aminy hahatonga azy ho mainty sy fotsy
3 Ataovy avoaka ny sosona 1 ary ajanony ny fantsona R amin'ny safidy mifangaro mandroso
4 Ampio ny foy ary mamorona vondrona sosona ao amin'ny Photoshop
5 Mamorona ny vokan'ny sary tapaka
Omano ny loharano ilaina mba hamoronana ny vokatry ny glitch ao amin'ny Photoshop
Alohan'ny hanombohantsika dia andao jerentsika izay ilainao hanaraka an'ity lesona ity: mila anao aloha ny sary izay tianao hampiharana ny vokany ary lamina tsipika mainty sy fotsy mitsivalana, azonao atao ny misintona azy avy amin'ny banky sary rehetra, ilay nampiasako dia avy amin'ny pixaby.
Sokafy ny sary ary averina mitovy aminy hahatonga azy ho mainty sy fotsy
Handeha isika sokafy aloha ny sary dia hataonay mitovy aminy. Hataontsika amin'ny loko mainty sy fotsy ity sosona vaovao ity, misy fomba roa hanatanterahana izany:
Safidy iray ny mandeha any amin'ny kiheba "sary", eo amin'ny menio ambony, mandehana any amin'ny "setting" ary kitiho ny "desaturate".
Ny iray hafa dia mandehana any amin'ny "sary"> "fanovana" ary kitiho ny "mainty sy fotsy".
Amin'ity tranga ity dia mamporisika anao aho hanao izany amin'ny fomba faharoa, satria io no izy mamela anao hanamboatra mainty sy fotsy. Mba hampiharana ny vokan'ny glitch dia tsara kokoa raha toa ka maizina ny fotony, ka nahenaiko kely ny haavon'ny mena sy ny mavo ary ny cyan.
Ataovy avoaka ny sosona 1 ary ajanony ny fantsona R amin'ny safidy mifangaro mandroso
Hanao tahaka an'io sosona vaovao io isika (sosona 1) (mamorona sosona 2). Aza tsindrio havanana amin'ny «layer 2» ary amin'ny menio izay hiseho dia tsindrio safidy fusion. Hisokatra ny varavarankely, hitady ny ampahany voalaza ao "Fusion lavitra". Ery, vonoy ny fantsona R. Ankehitriny, miaraka amin'ny fitaovam-pamindrana, afindra somary miankavia ny "layer 2".
Ampio ny foy ary mamorona vondrona sosona ao amin'ny Photoshop
Fotoana izao ampidiro ny foy. Hisintona azy amin'ny efijery ary manova ny haben'ny sary mba hifanaraka amin'ny sary. Rehefa manitsy azy ianao dia ovao ny fampifangaroana endrika "overlay". Ny dingana manaraka dia opacity ambany amin'ity sosona ity. Havelako amin'ny 30% io, fa tsy sandany marina izany, ampifanaraho amin'ny sitrakao.
Raha tsy resy lahatra ianao hoe aiza no misy ny tsipika, azonao afindra hatrany ny sosona "raster" miaraka amin'ny fitaovana mifindra na amin'ny baiko + T (Mac) na fanaraha-maso + T (Windows). amin'ny sosona rehetra ananantsika hatreto, afa-tsy ny ao ambadika, hamorona vondrona iray izahay. Raha te hamorona vondrona misy sosona ao amin'ny Adobe Photoshop dia tazomy ny lakilen'ny fanovana ary kitiho ny sosona rehetra tianao hivondronana hisafidianana azy ireo. Aoriana, soraty ny baiko + G (Mac) na fifehezana + G (Windows).
Mamorona ny vokan'ny sary tapaka
Handeha isika vondrona duplicate. Hanao tsindrio havanana amin'ny kopia ary ao amin'ny menio no hofidintsika «vondrona mitambatra» mamorona sosona tokana. Dingana iray sisa no hataontsika. Miaraka amin'ilay fitaovana zoro mahitsizoro hataontsika mahitsizoro samy hafa ny halavany sy ny habeny amin'ny sosona noforoninay, ary miaraka amin'ny fitaovana mifindra (azonao atao ny manindry ny baiko na mifehy fotsiny rehefa misintona), hampihetsika azy ireo izahay hamorona ny Vokatry ny "sary tapaka". Afaka mamorona betsaka araka izay itiavanao azy ianao Ahoana ny hevitrao amin'ny valiny farany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hanaovana ny vokan'ny glitch amin'ny Photoshop, tsikelikely